ဒလ တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်နိုင်ရန် စီစဉ် | dawnmanhon
ဒလ တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်နိုင်ရန် စီစဉ်
ဒလ တံတား၏ ပုံစံငယ်အားတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ--M.O.I)
ဒလတံတားတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ထားကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဒလတံတား စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ပထမအကြိမ် မြေယာလျော်ကြေးငွေကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က ငွေကျပ်သိန်း ပေါင်းတစ်သောင်း အား လည်းကောင်း၊ ကျန်ရှိ နေအိမ်သုံးလုံးအတွက် ငွေကျပ်သိန်း ၃၉၇ . ၉၄သိန်း ကို လည်းကောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ မှ ၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် တံတားဧရိယာနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် နေအိမ်နှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများ အား အပြီးသတ်မြေ ယာလျော်ကြေး၊ မြေငှားထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် ငွေကျပ် ၄၂၁၄ . ၉၄သိန်း ပေးအပ် ခဲ့ပြီး အဆိုပါ တံတားစီမံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် နစ်နာကြေး ထောက်ပံ့ငွေ စုစုပေါင်း ၁၄၆၈၂ . ၈၈သိန်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒလ တံတားကို သံမဏိကြိုးဆိုင် လေးလမ်းသွား တံတားကြီးအဖြစ် မကြာခင် စတင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကာ အရှည်ပေအားဖြင့် ပင်မတံတားအရှည် ၁၉၃၆ပေ နှင့် တံတားအရှည် စုစုပေါင်း ၆၁၄၃ပေ ရှိမည်ဖြစ်သည်။ တန်ချိန် ၁၅၀၀၀ခန့်ရှိ သင်္ဘောကြီးများ ရေလမ်းကင်း လွတ်စွာ သွားလာနိုင်ရန် အမြင့်ပေ ၁၆၀ ခန့် နှင့် ရေလမ်းကင်းလွတ် အကျယ် ၅၂၅ပေ ထားရှိ ဆောက်လုပ်သွား မည်ဖြစ်ကာ ယာဉ်တစ်စင်းချင်း ခံနိုင်ဝန်အားဖြင့် ၇၅ တန်ထိ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုရီးယား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ)တံတားကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ (EDCFI Loan) ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇ ဒဿမ ၈၃၃ သန်း၊ ပြည်တွင်းရန်ပုံငွေ ၃၀ ဒဿမ ၃၄၁ သန်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၈ ဒဿမ ၁၇၄သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုရီးယား ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တို့မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ က ချေးငွေဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းကာလမှာ (၅)နှစ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အပြီးတည်ဆောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဒလတံတားတည်ဆောက်ရေး အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းအတွက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Soosoog Co.Ltd ခေါင်းဆောင်သော J.V အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင် ရွက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဒလတံတားတည်ဆောက်ရာတွင် ဒလမြို့နယ်အတွက် ရေချိုပိုက်လိုင်းများပါ တပါတည်း ထည့်သွင်း တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ပါရှိသည်။
dawnmanhon: ဒလ တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်နိုင်ရန် စီစဉ်